Salaad Cali Jeelle Muxuu 11 Sano U Deganaa Hotel? – Shabakadda Amiirnuur
Maqaallo, Maxaa Cusub, Uncategorized, Wararka Gudaha
November 3, 2017 4:45 pm by admin Views: 284
jimco, November, 03, 2017: Mararka qaar anigu waan la yaabi jiray markaan maqlo Al-Shabaab ayaa weeraray hotel ku yaala jidka Maka Al-mukarama ama kuwa u dhow, waxaan is weydiin jiray su’aalo ay kamid yihiin: tolow maxaa weerarada ku kali yeelay hoteelaas? Maxay hoteeladan uga duwan yihiin kuwa ku yaala wadooyinka sodonka, wadnaha iyo inta badan degmooyinka caasimadda?
Haddaba maalin kadib weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay hotel Naasa-hablood (2) ayaa waxaa sirta meesha ku jirta bannaanka soo dhigay Salaad Cali Jeelle kaasoo sheegay in muddo ku dhow 11 sano uu deganaa hotel Naasa-hablood (2) isagoo sheegay iney amnigiisa ka taxadareen balse meel aaney ku tala galin laga soo galay.
Markii aan dhuuxay wareysigii ay BBC-du ka qaaday Salaad waxaan is weydiiyay su’aal ah: tolow muxuu Salaad u degi waayay gurigiisa? Maxaase faa’iido ah oo uu ku qabay hotelka? Waxaana ii soo baxay in uu amnigiisa ku aamini waayay meel aan ahayn hotel Naasa-hablood oo kale, dabcan waana midda keentay in Al-Shabaab ay beegsadaan sida uu sheegay Afhayeenkooda dhanka ciidamada Sheekh Abuu Muscab.
Hadalka Salaad Cali Jeelle waxa kaloo iiga baxay in dadka dowladda ka tirsan ay noloshooda ku baxdo lacag badan oo u baaqan lahayd haddii ay nabad ku heli lahaayeen guryahooda, waxaana mid walba oo hotel deggan lagu leeyahay deyn, maadaama bishiiba uu isticmaalo wax ka badan kun dolar.
Qore: Axmad Yare